कलियुगको रावण मार्दै अक्षय कुमार ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कलियुगको रावण मार्दै अक्षय कुमार !
१३ आश्विन २०७०, आइतबार १० : ०१ बजे
ठुलोपर्दा डटकम, मुम्बई- अक्षय ‘खिलाडी’ कुमार अब राम बन्दैछन्। उनले लंकाको राजा रावणको वध पनि गर्नेछन्। पर्खनुहोस्, हामी उनको आगामी चलचित्रको कुरा गर्दै छैनौँ। भारतकै ठुलो ईभेन्ट ‘राम लिला’मा अक्षय राम बन्ने भएका हुन्। त्यसमा पनि वलिउडकै पहिलो कलाकार हुन यिनी जसले दिल्लीमा हुने ‘राम लिला’मा सहभागिता जनाउँदैछन्।
उनलाई सो ईभेन्टको व्यवस्थापक कम्पनी ‘लभ-कुश राम लिला समिती’ले विशेष रुपमा निमन्त्रणा गरेको हो जुन अक्षयले स्विकार गरिसकेका छन्। यसअगाडीका ‘राम लिला’मा भारतिय राजनितिज्ञलाई मात्र सहभागि गराईँदै आईएको थियो। यसपाली यो राम्रो सुरुवात भएको छ जसमा कलाकारले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन पाउनेछन्।
यस बिषयमा अक्षयले बताएका छन्, “यो सम्माननिय ईभेन्टको एउटा हिस्सा बन्न पाउँछ अत्यन्त हर्षित छु। म आयोजकलाई धन्यवाद नभनिरहन सक्दिन। दिल्लीले त्यो बिशेष ठाउँलाई मेरो दिलमा बस्ने मौका दिने छ। मैले अवश्य ‘रावण वध’ गर्नेछु”।